Iwe wakaita Crossword Puzzles? Ungada kuti mari apo achitamba nayo? Kana mhinduro zvose mibvunzo aya ehe, zvino Crossword Cash rinongova kwamuri. ichi Crossword Jackpot Game ndiye kuedza kana uine hutenzi nemashoko. All zvaunofanira kuita kuti mamwe mashoko uye tora kumusha vamwe bonuses mikuru. mutambo rino rakagadzirwa uye kugadzirwa kunze IWG ndiani akakurumbira kusika vamwe vakanaka pakarepo takunda mitambo iri indasitiri. The Graphics akagadzirirwa kutarira ave Crossword dambanemazwi uye Scrabble bhodhi. All zvaunofanira kuita kusika zvimwe mashoko kubva tsamba ndakupa. Sounds nyore? tsime, ndizvo! Saka regai kutambisa nguva, enda kuna IWG playing kuridza ichi zvinoshamisa Crossword Jackpot Game pari zvino.
The Logo ndicho chinhu chokutanga munoona sezvo Pamunopinda mumusha chidzitiro. Below zvakasiyana matafura matatu. Kurutivi rwokurudyi, pane tafura rine bumbiro siyana. Kurutivi rwokurudyi ane mubayiro kiyi tafura ine zvose tsika dzose mibayiro. Semuyenzaniso, kana iwe kuti 3 Mashoko Unopinda £ 5 kana iwe kuti 4 words you get £10 and so on. The vaifanira kuti 10 words will give you a £100,000 which is also the highest winning in one bet. At nechepakati peji muchawana tafura apo iwe kuisa yemaarufabheti echiCyrillic rokusika mashoko. The dzinonakidza kupfuura chikamu ichi Crossword Jackpot Game raro yakakwirira RTP ukoshi. Kukosha RTP ndiko 86.62%, inova rakakura.
How To Play Izvi Crossword Jackpot Game?
The Gameplay pamusoro Crossword Cash zviri nyore. Asati atanga mutambo, iwe uchava akakumbira kuisa kwako bheji kukura nokuda nekudzvanya pamusoro + uye _ mabhatani. Kana maita kuti, tinya Play bhatani. Mitemo vari nyore. Uri kupiwa 18 bumbiro kuti vanofanira achazvibatanidza kuumba mashoko. Unofanira kuisa bumbiro patafura Crossword iri nechepakati chidzitiro. A zvishoma tsamba nhatu anofanira kuumbwa. Pane mubairo netafura parutivi kuti anokuudza sei muchapiwa nokuita 3 kana tsamba zvakawanda. The mutambi mubayiro yapera nechimwe rwakapoteredza.
ichi Crossword Jackpot Game zviri nyore chaizvo kuti vanhu vari ainyatsoziva Scrabble uye mitambo. Achigadzira mashoko ari munhu here nyore uye kuwana mari zvakanaka kubva unonakidza kunyange kunakidza. wo, guru RTP uye pamusoro kirasi Graphics kuti mutambo uyu vayemurwe vanoda zhinji kasino.